Tag: bogagga carruurta | Martech Zone
Tag: bogagga ilmaha
Talaado, Febraayo 13, 2018 Talaado, Febraayo 13, 2018 Douglas Karr
Waxaan ka shaqeyneynaa hirgelin aad u adag oo loogu talagalay macaamiisha shirkadda hadda. Goobta waxaa laga dhisayaa WordPress laakiin waxay leedahay tan dawanno iyo fooriyo ah. Badanaa, markaan qabanayo shaqada noocan ah, waxaan jeclahay inaan keydiyo koodhka gaarka ah ee dib loogu soo celiyo goobaha kale. Xaaladdan oo kale, waxaan u maleynayay inay tahay waxtar faa'iido leh, waxaan doonayay inaan adduunka la wadaago. Waxaan u adeegsanaynaa mawduuca Avada WordPress